Uthi ubeyiqagela nje iphenathi kaMbatha ayivimbile uMweene weSundowns - Impempe
Uthi ubeyiqagela nje iphenathi kaMbatha ayivimbile uMweene weSundowns
Uveze ukuthi akungoba bezilolonga noma begxila ekuvimbeni amaphenathi uma bezilolonga unozinti weMamelodi Sundowns, uKennedy Mweene ovimbe iphenathi behlula iTS Galaxy ngeSonto.
Ngesikhathi iSundowns ihamba phambili ngo 1-0 kulo mdlalo weDstv Premiership obuseMbombela Stadium eNelspruit, iRockets ibekelwe iphenathi ngemuva kokuba uMosa Lebusa ebambe ibhola ngesandla.
Kodwa uMweene umgezile uLindokuhle Mbatha othunywe ukuba akhahlele le phenathi nokuholele ekutheni akhishwe engabe esabuya esiwombeni sesibili.
Yize uMweene enconyiwe ngendlela akhombise ubuhlakani ngayo evimba le phenathi, uthi uzisebenzisele ulwazi aseluzuze kule minyaka eminingi edlala ukudida uMbatha.
“Akusikhona ukuthi amaphenathi akuyona into esizilolonga kuyo zonke izinsuku. Ngicabanga ukuthi yinto oyenza ngaleso sikhathi (uma kuvela iphenathi). Mina ngibheka umzimba womdlali ozokhahlela iphenathi ukuthi ume kanjani. Kulokhu ngisebenzise namava ami ukudlala ngaye, ngimbonile ukuthi ume kanjani ngabe senginquma ukuthi ngizoya kwesokudla,” kusho uMweene kwi-video ayenze nabeSundowns abayifake ezinkundleni zokuxhumana zeqembu.
“Ngenhlanhla yami yila naye ayishaye khona iphenathi, ngebhadi lakhe ngalifica ibhola ngalivimba. Kumnandi, kodwa iseminingi imidlalo esele futhi ngicabanga ukuthi besikudinga ukuwina lona ngoba manje sesingaphefumula njengoba sesinegebe lamaphuzu ayisikhombisa,” kuchaza lo nozinti odabuka eZambia.
UMweene ubedlala ngoba unozinti ojwayele ukuqala imidlalo, uDenis Onyango ubengekho nokuvele ukuthi kube nesimo esiphuthumayo esimphoqe ukuba aye ekhaya e-Uganda.
Kukholakala ukuthi uzobe esebuyile nokho uma aMasandawana esedlala ne-Al Ahly kwiCAF Champions League ngoMgqibelo eLucas Moripe Stadium ngo-3 ntambama.
Previous Previous post: ‘Amakinati’ akhokhwa ophromotha eKZN abalekisa amabhokisa
Next Next post: Akabafuni abadlali abaphekwe ngabanye, uyaziphekela yena uNcikazi we-Arrows